MACLUUMAADKA TARANKA EEYGA VIZMARANER IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka eeyga Vizmaraner iyo Sawirro
Vizsla / Weimaraner ey isku dhafan oo isku dhafan
Iftiimi Vizsla / Weimaraner isku dar sida eyga qaangaarka ah - 'Blitzen waxay ka timid hooyo Wiemaraner iyo aabe Vizsla, labaduba waxay ka diiwaan gashanaayeen AKC iyo UKC. Blitzen wuxuu ahaa eey firfircoon oo jecel. Mar kasta oo uu fursad u helo inuu sariirta nala seexdo, wuxuu jecel yahay inuu isku laabo cagahayaga oo uu siiyo leefis wanaagsan. Isagu waa eey macaan, naxariis badan, jacayl badan oo xanaaq badan. Wuxuu jecelyahay dadkiisa wuuna jecelyahay gabadhayada. Isagu wax weyn buu ku sameeyaa annaga bisadaha , oo uu si fiican ula jaanqaado 'sirtiisa' a Isku darka Doberman Pinscher / Jarmalka Shepherd . Marka laga reebo inuu xoogaa si xoog leh u dhaawacan yahay oo uu ku sarreeyo tamarta, waa eey cajiib ah. '
Vizmaraner ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Vizsla iyo Weimaraner . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
adhijir Australia qasan spaniel Cocker
Iftiimi Vizsla / Weimaraner iskudhaf taranka sida eey dhalinyaro ah oo qurux fadhiya
Iftiimi Vizsla / Weimaraner isku dar sida eyga qaangaarka ah ee jira 3 sano ee barafka xiran jaakad buluug ah
Iftiimi Vizsla / Weimaraner isku qas eeyaha eyda sida eey oo kale oo leh toykiisa casaanka ah
Iftiimi Vizsla / Weimaraner isku qas ey sida uu u egyahay oo ku raaxeysanaya banaanka
Hazel the Vizsla / Weimaraner iskudhafka eyda eygu waa eey aad u firfircoon laakiin la tababaran karo oo ah arday aad u deg deg badan oo leh tamar aan dhammaad lahayn. Lahaanshaha sawirka eeyaha oo wata Dave, San Diego Dog iyo Puppy Trainer
Hazel the Vizsla / Weimaraner iskudhaaf ey ey, sawir xushmad leh eeyaha iyo Dave, San Diego Dog iyo Puppy Trainer
midabka beerka retriever dahaarka leh